Windows Media Player 64 yara ayaa noqonaya doorashada cusub ee ka mid ah dadka ka soo adduunka oo dhan. Waxaa jira dhowr arimood oo masuul ka ah doorashada taasi si kastaba ha ahaatee waxaa weli jira dad badan oo la shaqeeya Windows Media Player 32 yara oo u arkaan in ay qayb ku haboon.
Windows Media Player 32 yara vs. 64 yara
Windows Media Player waa audio default iyo video ciyaaryahanka ay bixiyaan daaqadaha ka hawlgala nidaamka. Marka waa inaad ku labanlaabtaa guji ciyaaryahanka icon windows media, by default, waxaa laga furay version 32 xoogaa keliya. Dadka ayaa la isticmaalayn version 32 xoogaa waqti ka dheer hadda iyo u arkaa in ay heer sare haboon. Si kastaba ha ahaatee version 64 xoogaa cusub ee windows media player waa ka fiican oo aad u waxtar fiican marka la barbar dhigo version 32 xoogaa ah. Iyada oo inta badan dadka ma heli farqiga u badan, 64 yara version xoogaa dhakhso yahay marka la barbar dhigo ururka ka horeeyey. Sidaas haddii aad daaqadaha adigoo media player 64 yara version, waxaad filan kartaa in dhaqso syncing iyo gubi falalka. Waxaad haysan doontaa in la abuuro a windows media ciyaaryahanka 64 version yara icon cad haddii aad rabto in aad isticmaasho version oo keliya. Oolnimada sare iyo waqtiga jawaabta dhakhso tahay sababta ugu weyn sababta waxaa la fadilay version 32 xoogaa ah.
Qaybta 1aad: Sida loo ogaado haddii daaqadaha waa 32 xoogaa ama 64 yara
Qeybta 2: Switch, beddelaan ama wax ku dhow 64-yara windows media player 11 ee x64 Vista daaqadaha sida default
Qeybta 3: Top 3 codecs for Windows Media Player 64 yara
On Windows 8, 8.1 iyo 7
Waxaad su'aashan ku qasabno hal oo kaliya dhowr ka heli kartaa jawaabta. Wixii Windows 7, 8 iyo 8.1, habka waayo helo version isku mid. Waxaa laga yaabaa inaad raacdo tallaabooyin fudud yar oo lagu ogaan karo in aad ka shaqeeya 32 yara version ama version 64 xoogaa ka mid ah nidaamka hawl gal ah. Halkan waxa ku jira 3 tallaabo lagu garto version in daaqadaha 7, 8 iyo 8.1 yara.
Talaabada 1: fur guddi ay gacanta.
Talaabada 2: Under qaybta nidaamka iyo ammaanka, waxaad ka arki kartaa version yara nidaamka qalliinka la socda oo ku saabsan.
Haddii "View Classic" ah guddi ay gacanta ku waa karti, markaas aad si fudud u arki kartaa version xoogaa hoos "nooca nidaamka".
Haddii aad rabto in aad ogaato in nidaamka qalliinka Vista daaqadaha waa 32 xoogaa ama 64 yara, ka dibna raac tallaabooyinkan:
Talaabada 1: fur guddi ay gacanta ku dhex menu bilowga.
Talaabada 2: dooro "nidaamka iyo dayactirka" link.
Talaabada 3: In "nidaamka iyo dayactirka" cusub uu furmo suuqa, doorato nidaamka icon ah.
Talaabada 4: Raadi nooca habka ee ku yaala goobahan oo aad si fudud u arkaan, in nidaamka qalliinka aad ayaa taageereysa 32 xoogaa ama 64 yara.
Go'aaminta version of nidaamka qalliinka aad loo baahdo waxaa laga yaabaa in had iyo jeer si loo soo dajiyo iyo dooran darawallada saxda ah. Haddii aad rabto in aad ogaatid in nidaamka qalliinka XP daaqadaha aad ku saleysan yahay 32 xoogaa ama 64 yara, ka dibna raac tallaabooyinkan fudud:
Talaabada 1: fur guddi gacanta ka bilaabatay menu.
Talaabada 2: Wuxuu furaa "waxqabadka iyo dayactirka" link.
Talaabada 3: Riix icon nidaamka halka aad ka heli doonaa guryaha nidaamka ka.
Talaabada 4: furmo suuqa guryaha nidaamka wuxuu yeelan doonaa dhamaan macluumaadka la xiriira version aad nidaamka. Wixii Windows XP, Windows XP Professional version ka dhigan tahay 32 yara iyo Windows XP Professional x64 Edition ka dhigan tahay 64 yara.
Haddii aad isticmaalayso ku Vista daaqadaha 64-yara, ka dibna windows media player 32 yara noqon doonaa default daaqadaha media player version. Si kastaba ha ahaatee waxaad bedelan kartaa in version 64 xoogaa ah ciyaaryahanka warbaahinta daaqadaha si aad u fudud iyo sidoo kale waxa ay ka dhigi doontaa sida default version aad kaliya by socda tallaabooyin yar oo sahlan. Mase laga version 64 yara ee windows media player ah sidoo kale waa muhiim sababtoo ah dhowr arrimood oo waafaqsan.
Fadlan raac talaabooyinkan si ay u dejiyaan 64 yara windows media player 11 sida default in Vista daaqadaha:
Talaabada 1: fur degdeg ah amarka.
Talaabada 2: Nooca "unregmp2 / SwapTo: 64" in si degdeg ah amarka iyo saxaafadda galaan button.
Talaabada 3: interface regedit ayaa ka muuqan doona. In interface taas, ku qor socda waddada,
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE \_ \_ Microsoft \_ Windows \_ CurrentVersion \_ App waddooyinka \_ wmplayer.exe
Talaabada 4: In edit interface diiwaanka, dooro "default" iyo xaq u riix si aad u hesho fursad u beddelo. Waxaad arki doontaa in ay default, version 32 yara ee windows media player la soo xulay.
Talaabada 5: beddel ururada faylka by khaanada soo socda:% ProgramFiles% \_ Windows Media Player \_ wmplayer.exe.
Talaabada 6: In interface ee kor ku xusan, guji "ok" in ay aqbalaan isbedelada.
Tallaabo 7: Diiwaanku wuxuu final eegto waa sida soo socota 64 yara windows media player.
Media Player codec pack waa codec 64 xoogaa waxtar leh ah windows media player kaas oo kuu ogolaanaya in aad u ciyaaro tiro ka mid ah noocyada kale ee audio iyo video files.
Developer: Media pack ciyaaryahan codec
Download URL: http://download.cnet.com/Media-Player-Codec-Pack/3000-13632_4-10749065.html .
1: ogolaanayaa inaad u ciyaaro kasta audio / video file aad windows media player.
2: waxa uu caawiyaa in sida fiican u ciyaareyso Windows XP audio / video files.
3: xorriyadda Buuxi in la doorto wax soo saarka laga bilaabo 2.0 channels in 7.1 channels.
4: ogolaanayaa inaad encode files ee DivX iyo qaabab kale.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaaro nooc kasta oo file in aad windows media player ay ka mid yihiin Blu-ray, ka dibna soo bixi baakada daruuriga daaqadaha codec warbaahinta. Codec Tani waa lacag la'aan si ay u soo bixi oo waxaad siin doonaa tiro ka mid ah qaababka aad u fiican.
Download Link: http://download.cnet.com/Windows-Essentials-Media-Codec-Pack/3000-13632_4-10662709.html .
1: User saaxiibtinimo interface.
2: Waxaa ka mid ah taageero muddo ku dhow nooc kasta oo audio file / video.
3. MP3 codec for Windows Media Player
Beddelaan file kasta oo MP3 oo uu gubaa siduu halkii laguugu sahlo oo isticmaalaya daaqadaha media player.
Download Link: http://download.cnet.com/mp3-codec-for-Windows-Media-Player/3000-2169_4-10630559.html .
1: RIP off file kasta oo qaab MP3 ah oo way gubi doonaan.
2: Calan heerka sampling iyo tayada sababtay ah.
> Resource > WMP > 3 talooyin ku saabsan Windows Media Player 64 yara